Archive du 20200818
Fanadinam-panjakana Sao dia mba ho kitoatoa indray ?
Terena fotsiny ny mpampianatra, hoy ry zareo sendikan’ny mpampianatra omaly, raha nahita ireny tany Toamasina ireny ianareo. Ataovy ny fanatanjahantena dia apetrao ny arotava.
Politika avo lenta Mifamingana ny samy mpitondra...
Fanomezana ara-pitaovana no nataon’ny PNUD, fa tsy nisy hoe tsenambaro-panjakana, hoy ny Minisitry ny atitany teo anatrehan’ilay raharaha fampitaovana mitentina 216 tapitrisa ariary mahery, izay ity minisitra ity sy ny vadiny no manasonia ny faktiora,
Faniry Razafimanantany “Anjaran’ny vahoaka no mandray fanapahan-kevitra”
Tsy azo ialana ny hoe hifamatotra amin’ny krizy ara-pahasalamana ny krizy ara-tsosialy ary hifandray amin’ny krizy ara-tsosialy ny krizy ara-toekarena dia io hitantsika mitarika amina krizy politika io,
TAMAMI Mangataka ny hanesorana ny Praiminisitra
Mangataka ny hanalana ny lehiben’ny governemanta Ntsay Christian amin’ny toerany ny antoko politika TAMAMI, tarihin’ny filoha nasionaliny Atoa Samihary Floriot.
Ambodivona Maty may kilan’ny afo ilay lehilahy lehibe
Nitrangana haintrano namoizana ain’olona omaly maraina tetsy Ambodivona, akaikin’ny toeram-pivarotan-tsolika Galana. Lehilahy lehibe iray izay 85 taona no fantatra fa namoy ny ainy tamin’izany,
Mpitsabo Malagasy FI.TR.AMA Hampidina ny vidim-panafodiny mba ho zakan’ny rehetra
Hanao fanavaozana makadiry eo anivon’ny orinasa tantanany Rafanomezantsoa Jean Nirina manomboka izao.
Fahavakisan’ny sambo WAKASHIO Nangataka tolo-tanana amin’i Madagasikara i Maorisy
Nangataka tolo-tanana amin’i Madagasikara i Maorisy mba hanampy azy hiatrika ny voina taorian’ny fahavakisan’ilay sambo mpitatitra entana MV Wakashio ao an-toerana ny 25 jolay lasa teo.
Tameantsoa- Betioky Atsimo Vehivavy narary teo am-pandriana may kila
Nisesy ny haintrano namoizana ain’olona tato ho ato. Tsy eto an-drenivohitra ihany fa hatrany amin’ny Faritra ihany koa.
Masoivohon’i Japon Yoshihiro Higuchi Mangataka ny hamelana an’Ambatovy hisokatra
Mpiasa 3500 no nalefa “chômage technique” tao amin’ny Orinasa Ambatovy nanomboka ny volana mey noho ny fisian’ny olona voan’ny Covid 19 sy ny fahafatesana teratany Filipianina iray.
Mahajanga Nanao antso avo koa ireo mpivarotra eny amin’ny Plage
Raha mbola tsy nahitam-baliny ankehitriny ny fangatahan’ireo mpivarotra “brochettes” eny amin’ny “Bord”
Kaominin’i Ranomafana “Tsy maintsy hampandehanina ny fotodrafitrasa”
Nisento kely ny mponin’i Ranomafana taorian’ny fanapahan-kevitra ny amin’ny hanalalahana ny fisokafan’ny lalam-pirenena ao amin’ny faritra Atsinanana, hoy ny ben’ny tanana ao an-toerana,
Maneno ny lakolosy
Maneno ny lakolosy. Tsy hoe fidirana an-tsekoly akory fa tena lakolosy fanairana mikasika izay heverina ho loza mitatao amin’ny tontolon’ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Vohemar Havaozina ny seranan-tsambo
Nanatanteraka fivoriana mahakasika ny “culture de rentes” toy ny fambolena jirofo, lavanila... niaraka tamin` ireo lehiben` ny sampandraharaha ara-paritra ao SAVA ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola (MEF) Richard Randriamandrato, omaly maraina tany Sambava.
Tsenam-barom-panjakana Nivoaka ny drafitra ho amin` ity taona ity
Nivoaka eny amin` ny pejy fesibokin` ny minisiteran` ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny planina navaozina mahakasika ny tsenam-barom-panjakana ho amin` ity taona 2020 ity.
Famolavolana tanàna vaovao Handrafitra bokin`andraikitra iombonana ny ministera
Manana ny rehetra handray anjara amina takalo-kevitra vitsivitsy amin’ny alalan’ny tranonkala na WEBINAR ny Ministera Lefitra misahana ny Tanàna Vaovao sy ny Fonenana izay ao anatin’ny fanatanterahana ny fanapariahana ny Tanàna Vaovao.
SEMPAMA « Omeo anay ny minisiteran’ny fanabeazana »
Tsy nitsitsy fitenenana ry zareo avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra
Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina Havaozina ny satan’ny mpanakanto
Ho fampiarana ny fandaharan’asa sahanin’ny fitondram-panjakana izay mifandraika amin’ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ho fampivoarana ny
Anosibe Nifoka rongony no sady nandratra olona izy roalahy
Lehilahy roa no voasambotry ny polisin'ny boriborintany fahadimy ny 16 Aogositra lasa teo teny Anosibe Rond point tokony ho tamin'ny 9ora alina. Tratra nifoka rongony izy ireo ka olona nivoaka ny elakelan-trano avy teo akaikin'ny Supermaki no nahatsikaritra izany.
Antsahavaribe Vohemar Olona telo matin’ny fitsaram-bahoaka
Vehivavy roa sy lehilahy iray no niara-namoy ny ainy, niharan’ny fitsaram-bahoaka tany amin’ny Kaominina Antsahavaribe Distrika Vohemar. Voatonona ho mpisoloky, manome fanafody fampatoriana toy ny « valium » ny olona iantranoany izy ireo avy eo mangalatra lavanila.
Halatra Tuk Tuk Voavely maritoa ny lohan’ilay mpamily
Lehilahy iray 25 taona izay voalaza fa mpangalatra tuk tuk no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny SUT Toamasina ny 16 aogositra lasa teo tokony ho tamin’ny 7 ora hariva.
Akany Iarivo Anosizato Maniry hotohanana hatrany ireo fianakaviana sahirana
Mahatratra 300 ireo olona mipetraka ao amin’ny Akany Iarivo Anosizato amin’izao avy amina fianakaviana sahirana ara-pivelomana miisa 102.
Anosinalainolona-Marovoay 320 ha no ho afaka volena in-droa isan-taona
Lakandrano mirefy 3 km sy 14 m ao amin’ny Kaominina Anosinalainolona, Disitrikan’i Marovoay no diovina sy halalahina. Nanomboka ny sabotsy 15 Aogositra ny asa.
Ambalabe Ouest – Antsohihy Lehilahy iray hita faty tao anaty lakandrano
Hatairana ny an’ny olona, omaly marina, nahita fatin-dehilahy iray nihohoka tao anaty lakandrano tao Ambodimadiro, Fokontany Ambalabe Ouest, Antsohihy.
Lasa tokoa angamba ny Coronavirus Efa tanam-be midôla i Toamasina
Tena miverina amin’ny fiainana andavandro ara-bakiteny ny mponina ao Toamasina amin’izao fotoana izao, taorian’ny fanalefahana ny fepetra ara-pahasalamana.
Coronavirus eto Madagasikara 1 896 isaky ny olona 1 tapitrisa ny taham-pitiliana
Olona iray teto amin’ny faritra Analamanga indray no lavon’ny covid-19, ka 171 ireo namoy ny ainy hatramin’izay. 59 ny tranga vaovao omaly, hita tamin’ny fitiliana 371, izay manome taham-pahavoazana 15,90%.
Raharaha 216 tapitrisan’ny CCO Tsy mbola naneho hevitra ny PNUD
Fampitaovana nataon’ny mpiara-miombon’antoka, fa tsy nisy vola nandalo tao amin’ny CCO na ny ariary aza ilay raharaha 216 tapitrisa ariary nividianana ireo fitaovana, hoy ny Minisitry ny atitany Tianarivelo Razafimahefa. Tsy misy vola nomena notantanin’ny CCO, hoy izy.
CTC-19 Mahamasina Mifanakalo traikefa amin’ny any ivelany
Nisy ny fifanakalozana traikefa mikasika ny fandraisana an-tanana ireo mararin'ny Covid-19 izay nifanaovan'ireo miaramila misehatra eo amin’ny fahasalamana ao amin'ny CTC-19 Mahamasina sy ny dokotera
Fizaham-pahasalamana Miha vitsy ireo manantona CSB II
Mihena ireo olona manantona ny toeram-pitsaboana ambaratonga fototra na CSB II amin’izao fotoana izao.